» कमरेड कमलराज रेग्मी
छिट्टै पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । दोस्रो महाधिवेशनको तयारी सुरु भयो । महाधिवेशनको तयारीका सिलसिलामा रायमाझी प्यूठान आएका थिए । उनी बैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाति थिए । उनको विचारबाट म पनि सहमत भएँ र बैधानिक राजतन्त्रको मतलाई समर्थन गरेँ । त्यस मतका साथ म महाधिवेशनमा गएको थिएँ ।पछि मलाई थाहा भयो कि कमलजी केन्द्रीय समितिमा गणतन्त्रको लाइनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । महाधिवेशनमा गणतन्त्रको पक्षमा व्यापक वातावरण थियो । मैले गणतन्त्र पक्षका कैयौँ तर्कहरू सुनँे । त्यसपछि गणतन्त्र र बैधानिक राजतन्त्र मध्ये कुन मतलाई समर्थन गर्ने ? म दुविधामा परँे । तर केन्द्रीय समितिमा कमलजी गणतन्त्रको पक्षमा भएपनि महाधिवेशनमा उहाँले त्यो विचार प्रकट गर्नुभएन । महाधिवेशनको बेलामा रायमाझीको तीव्र विरोध भएको थियो । कतिपयले ता माझीलाई कुटपिट समेत गर्ने वा चक्कुले हान्ने समेत धम्की दिएका थिए । माझीमाथिको त्यस प्रकारको विरोधका कारणले कमलजी पनि माझीको पक्षमा उभिन पुग्नु भयो ।पछि केन्द्रीय समितिमा महामन्त्रीको चुनाव हुँदा कसले कसको पक्षमा भोट दियो ? त्यो ता थाहा हुन सकेन तर महाधिवेशनको बेलामा म तटस्थ रहेको भए पनि मैले गणतन्त्रको लाइनको पक्षमा नै मतदान गरें । महाधिवेशनले गणतन्त्रको लाइनलाई पारित गरेको थियो । त्यसकारण मैले त्यसलाई समर्थन गरिरहेँ रपछि केन्द्रीय समितिमा गणतन्त्र र बैधानिक राजतन्त्रका बीचमा मतभेद भयो । माझीको पक्ष बहुमतमा भयो र गणतन्त्रको पक्ष अल्पमतमा पर्‍यो । कमलजी बहुमतको पक्षमा उभिनुभयो भने म अल्पमतको पक्षमा । केन्द्रीय समितिमा लगातार त्यसबारे दुईलाइनको सङ्घर्ष चलिरह्यो ।पछि संविधानसभाको प्रश्नमा पनि दुईलाइनको सङ्घर्ष चल्यो । जसमा माझीको नेतृत्वको बहुमत त्यसका विरुद्ध थियो भने पुष्पलाल, शम्भुराम सहित हामीहरू संविधानसभाको पक्षमा अल्पमतमा थियौँ । यो कुरा बेग्लै हो कि पौष १ गतेको घटनापछि दरभङ्गामा भएको प्लेनममा पुष्पलाल, शम्भुरामहरूले पनि संविधानसभाको नारालाई छोड्नु भयो र केन्द्रीय समितिमा त्यसका पक्षमा म एकजना मात्र बाँकी रहँे । तर प्लेनमले अत्याधिक बहुमतले संविधानसभाको नारालाई पारित गरेको थियो ।
अब कमलजी हाम्रा बीचमा हुनुहुन्न । तैपनि मेरो मनमा सधैँ यो कुरा लागिरह्यो ः उहाँ एउटा इमान्दार र कर्मठ कम्युनिष्ट हुनुहुन्थ्यो । पार्टीबाट उहाँको विचलन भए पनि त्यो एक प्रकारले परिस्थितिजन्य वाध्यता वा प्रतिकूल परिस्थितिका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्ने उहाँमा भएको आवश्यक दृढताको अभावको नै परिणाम थियो र अन्तमा उहाँले पार्टीको सदस्यताका लागि दर्खास्त दिएर आफ्ना सबै गल्तिहरूलाई पखाल्नु भयो र अन्तमा एउटा कम्युनिष्टको रूपमा नै उहाँको मृत्यु भयो । त्यसैले हामीले उहाँप्रति उच्च सम्मानका साथ श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछौँ ।